LG Q Stylus, Stylus Alpha ary Stylus Plus: Famaritana sy famoahana | Androidsis
Isan-taona, mazàna LG mamoaka modely eny an-tsena izay mampiasa ny stilosy. Na dia hatreto aza dia tsy naseho ny kinova tamin'ity taona ity izay hampiasa azy io. Farany tonga izao fotoana izao, satria ny orinasa dia nanolotra ny LG Q Stylus. Io no afovoan-tany vaovao an'ny orinasa Koreana, izay miavaka indrindra amin'ny fampiasana ny stila.
Na dia eo amin'ny lafiny lehibe aza ny eo afovoany, satria ny orinasa dia manolotra telefaona telo samy hafa amin'ity sokajy ity. Izy io dia ny LG Q Stylus, Q Stylus Alpha ary Q Stylus Plus. Ny fahasamihafana misy eo amin'ireo maodely telo dia kely dia kely, amin'ny ankapobeny amin'ny RAM sy ny tahiry anatiny.
Fa amin'ireo maodely ireo, ny marika dia manaraka ny tsipika nomen'ny LG Q natolotra herinandro vitsivitsy lasa izay, izay misy koa kinova telo. Ny toe-javatra mitovy amin'ny hitantsika ankehitriny miaraka amin'ity elanelam-potoana vaovao ity miaraka amin'ny stiln'ny marika. Lazainay bebe kokoa aminao ny momba ny maodely tsirairay.
1 Famaritana LG Q Stylus
2 Famaritana LG Q Stylus Alpha
3 Famaritana LG Q Stylus Plus
Famaritana LG Q Stylus
Manomboka amin'ny telefaona manome ny anarany ity fianakaviana vaovao ity eo afovoan'ny orinasa koreana izahay. Finday iray izay mamela anao hahatsapa ho tsara amin'ny ankapobeny. Volavola tsara, ankehitriny ary tsy misy ny fisian'ny notch, fakan-tsary tsara, ary fiasa tena mahaliana amin'ny ankapobeny. Ireto ny fepetra manokana momba ny LG Q Stylus:
efijery: 6,2 santimetatra misy 18: 9 tahan'ny ary FHD + vahaolana (2160 x 1080 / 389ppi)
lafiny: 160,15 x 77,75 x 8,4mm
processeur: 1,5GHz Octa-Core na 1,8GHz Octa-Core
Fitahirizana anatiny: 32/64 GB azo ovaina miaraka amin'ny microSD hatramin'ny 2 TB
Fakan-tsary eo aloha: MP 5 na 8 manana zoro Super Wide
Fakan-tsary Rear: MP 13 na 16 miaraka amin'ny PDAF
ny hafa: Stylus Pen, QLens, DTS: X 3D Surround Sound, IP68, Google Assistant, mpamaky ny rantsan-tànana, Fiampangana haingana
Amin'ny ankapobeny dia mampanantena izy fa safidy tsara ho an'ireo mpampiasa te hampiasa ny stilosy, nefa tsy mila miloka amin'ny finday avo lenta. Mety raha zatra ianao na tsy mahazo aina loatra amin'ny fampiasana ny écran amin'ny rantsan-tananao amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izay, ity LG Q Stylus ity dia mampiditra asa vaovao toa ny fitadiavana palma.
Voamarina ihany koa fa ny telefaona dia ho afaka hahafantatra ny stylus na dia eo amin'ny efijery aza. Ka ny fandraisana an-tsoratra dia ho mora kokoa noho io fampiasa amin'ny telefaona io. Ireo mpampiasa koa dia afaka mampiasa ny stilosy hamoronana horonan-tsary, hanovana sary, na hanovana GIF.
Famaritana LG Q Stylus Alpha
Ny telefaona faharoa amin'ny laharana dia misy fahasamihafana kely amin'ny maodely teo aloha. Raha atao manokana, marina manolotra safidy amin'ny resaka RAM sy fitehirizana anatiny. Ho fanampin'izay, somary maotina kokoa ny fakantsariny ary tsy mahazaka rano sy vovoka ity maodely ity. Ireto ny fiparitany:
Fitahirizana anatiny: 32 GB azo esorina miaraka amin'ny microSD hatramin'ny 2 TB
Fakan-tsary eo aloha: MP 5 miaraka amin'ny Super Wide Angle
Fakan-tsary Rear: MP 13 miaraka amin'ny PDAF
ny hafa: Stylus Pen, QLens, DTS: X 3D Surround Sound, Google Assistant, mpamaky ny dian-tànana, charge haingana
Raha tsy izany, ny sisa amin'ny famaritana dia mijanona tsy miova amin'ny LG Q Stylus mahazatra. Fiovana tsy mitongilana, fa zava-dehibe, indrindra ny tsy fanamarinana IP68 ity kinova ity. Ity dia lafiny iray lehibe tokony harahina rehefa mandeha mividy azy ianao.
Famaritana LG Q Stylus Plus
Farany, manana ny kinovan'ny Plus an'ity sokajy afovoany ity izahay miaraka amina stilosy. Ny famaritana an'ity modely ity dia somary tsara kokoa, amin'ny resaka RAM sy fitehirizana. Ireo fakantsary dia mitovy amin'ny hitantsika tamin'ny voalohany, manana kinova fakantsary anoloana miaraka amin'ny MP 5 na 8. Ity maodely ity koa dia mahatohitra ny rano sy ny vovoka. Ireto avy ireo antsipiriany feno:
Fitahirizana anatiny: 64 GB azo esorina amin'ny microSD hatramin'ny 2 TB
Fakan-tsary Rear: MP 16 miaraka amin'ny PDAF
Navoaka tamin'ny loko maro ireo maodely, na dia miankina amin'ny kinovan'ny telefaona aza ny fisafidianana. Amin'ny lafiny iray, ny LG Q Stylus Alpha dia tonga amina loko tokana ary manga ho voafaritra tsara. Na dia ho manga sy mainty aza ny kinova mahazatra an'ny telefaona ary ny loko Plus dia hisy loko telo: manga, mainty ary volomparasy.
Mikasika ny fandefasana azy dia antenaina fa halefa voalohany any Azia sy Amerika Avaratra. Famotsorana voafetra ity, izay tsy ho ela, na dia mbola tsy naseho aza ny daty famotsorana manokana.
Ny fanombohana azy any amin'ny faritra hafa toa ny Eoropa dia kasaina hatao amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity. Na dia efa nambara aza fa tsy ny faritra rehetra no handray ireo telefaona ireo. Ka manantena izahay fa hahafantatra tsy ho ela amin'ny faritra iza no azo vidiana.
Tsy mbola nisy voalaza momba ny vidin'izy ireo hatreto. Amin'ny maha LG azy ireo dia tsy izy ireo no ho mora indrindra eny an-tsena. Saingy tsy maintsy miandry ny fandefasana azy hahalala ny vidiny isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG Q Stylus, Stylus Alpha ary Stylus Plus: Ny eo afovoany dia miloka amin'ny pensilihazo
Xiaomi dia hanangana MIUI 10 amin'ny 7 Jona